Bandhigga Laporta oo bilawday…(Qandaraaska Messi, mustaqbalka Koeman, saxiixyada uu u dhaqaaqayo & xiddigaha laga fasaxayo Camp Nou) – Gool FM
(Barcelona) 18 Maajo 2021. Guuldarradii kooxda kubadda cagta Barcelona kasoo gaartay Celta Vigo kulankii Axadda ka dhacay Camp Nou ayaa soo af-jaray hardankii ay Barca ugu jirtay hanashada La Liga, sidaas darteed, waxaa lasoo warinayaa inay bilaabatay shaqeynta seefta Madaxweyne Joan Laporta oo looga fadhiyo xalinta dhowr arrimood oo la xiriira xalka xilliga adag ee kooxdiisa ku jirto looga saarayo.
Madaxweynaha Barcelona ayaa sida la sheegay u dhaqaaqay ole’olihiisa xalinta musiibooyinka ciyaareed ee kooxda ku habsaday xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay, waxaana si gaar ah loo eegayaa qaabka uu wajihi doono qandaraas kordhinta Lionel Messi iyo inuu kabtanka kooxdiisa ka dhaadhiciyo sii joogitaanka Camp Nou.
1- Miyuu Koeman sii joogi doonaa?
Dabciga maxadweynayaasha ayaa sida caadiga ah lagu yaqaanaa inay soo doortaan macallinka ay la shaqeynayaan, waana qodob cabsi gelinaya kursiga Ronald Koeman kaasoo qandaraaskiisu ka harsan yahay hal sano.
Inkastoo Laporta uu goor hore sheegay in Koeman sii joogi doono Camp Nou, haddana natiijooyinkii liitay ee bishan ayaa qalqal gelin doona mustaqbalkiisa.
2- Ka dhaadhicinta Messi inuu sii joogo?
Shaqooyinka hor yaalla Laporta waxaa ugu muhiimsan xalinta heshiis kordhinta Lionel Messi oo haatan u muuqata mid aanan wali dhanna u dhicin, hase ahaatee, rajadu ay u wanaagsan tahay Barcelona.
Kabtanka xulka qaranka Argentina ayaa si xor ah uga tagi kara Barca kaddib 30-ka June, balse ma jirto illaa iyo haatan naadi uu wada xaajood la bilaabay, waxaana lagu rajo weynyahay inuu Laporta ku guuleysan karo inuu Messi ka dhaadhiciyo inuu Camp Nou baaqi kusii ahaado sidoo kalena ay wada dhisaan mashruuc ciyaareed oo leh yididdiilo guuleed.
3- Yaa lagu xoojinayaa mashruuca dib u dhiska Barcelona?
Waxaa jiro xiddigo aan tiro yareyn kuwaasoo bartilmaameed u ah Barcelona si loogu xalliyo dhibaatooyinka ka heysta boosaska ay ka liidato sida daafaca dhexe iyo weerarka dhexe.
Waxaa haatan ay ku dhowdahay Barcelona saxiixyada Memphis Depay iyo Eric Garcia inay dhammeystirto iyadoo xitaa lasoo warinayo inay Garcia u harsan tahay in si rasmi ah loo shaaciyo, halka wararka qaarna ay sheegayaan inay Blaugrana si horudhac ah ay heshiis labo sano ah ula gaartay Sergio Aguero.
Erling Haaland ayaa ku jira qorshayaasha Barca, hase ahaatee, dhaqaalaha xooggan ee ay Borussia Dortmund ku dooneyso iyo qaanta ku maqan kooxda reer Spain ayaanan isu qalmin, sidaas darteed, waxaa la filayaa inuu xiddigo bilaash ah lasoo saxiixdo.
4- Kuwaa laga fasixi doonaa naadiga?
Laporta ayaa dib u dhiska kooxda ka bilaabaya inuu safkiisa ka sifeeyo xiddigaha aanan ahmiyadda u lahayn kooxda iyo kuwa aanan ku jirin qorshe ciyaareedka macallinka, si la mid ah xiddigaha qandaraasyadooda ay dhacayaan ayaa suuro gal ah in la is dhaafiyo.
Ousmane Dembele ayaa la iibin doonaa haddii uu diido inuu qalinka dul dhigo heshiiska cusub ee ay Barcelona diyaarka la tahay, sidoo kale waxaa suuqa si toos ah loo geyn doona difaacyada Faransiiska ah ee Samuel Umtiti iyo Clement Lenglet kuwaasoo qaab ciyaareed liita la yimid fasal ciyaareedkan.
Dhammaan dalabaadyada kale ee u imaanaya xiddigaha aan xusnay kuwa kasoo haray ayuu si gaar ah u qiimeyn doonaa Madaxweyne Laporte.
RASMI: Chelsea oo ku dhowaaqday laacibka ugu wanaagsan kooxdeeda xilli ciyaareedkan 2020-21... (Yaa ku guuleystay?)